Bakhaarka Dharka Internetka ee Stylish: Dharka Indhaha Ragga ee Casriga ah
Muraayadaha Muraayadaha Qoryaha ee loo yaqaan 'Wood Wayfarers' oo leh Kiiska Bamboo
qiimaha joogtada ah $ 47.85 Keydso $ -47.85
Qaabka caadiga ah ee loo yaqaan 'wayfarer style' oo leh qalab casri ah ayaa Mad Man Wood Wayfarers ka dhigaya muraayadaha ugu fiican ragga. Qaabkani wuxuu u muuqdaa mid ku fiican qaab kasta oo waji ah. Waa inuu lahaadaa qalab ragga ah xilli kasta ha ahaadee! Qaabka ugu kulul ee lagu daro raaxada. Qalabka muraayadaha qoryaha loo isticmaalo adkaysiga iyo xiisaha naqshadeynta. Kiiska muraayadda baasaboorka waara ayaa lagu daray. Nin waalan, sayidyada hadiyadaha ragga. Waxyaabaha: Qoryaha. Hal cabir ayaa ku habboon inta badan.
9 Bisadaha Lakabka 3 Lens Cat 3 waa muraayadaha indhaha lagu qiimeeyo ee ugu sareeya ee aad xiran kar